काजोल र न्यासालाई कोरोना ? अजयले दिए जवाफ – " सुलभ खबर "
काजोल र न्यासालाई कोरोना ? अजयले दिए जवाफ
सामाजिक संजालमा अहिले झुटा खबर फैलिन समय लाग्दैन । बलिउड कलाकारलाई लिएर यस्ता खबर दैनिक सार्वजनिक हुने गर्छन सामाजिक संजालमा नायिका काजोल र उनकी छोरी न्यासाको बारेमा एउटा खबर फैलियो । काजोल र न्यासालाई कोरोना भाइरसले आक्रमण गरेको खबर सामाजिक संजालमा फैलियो ।
योसँगै काजोलका शुभचिन्तकहरुले यसमा चिन्ता जताएका थिए । तर, अब यो बिषयमा नायक अजय देवगणले मुख खोलेका छन ।अजयले सामाजिक संजालमा यसको जवाफ लेख्दै शुभचिन्तकहरुलाई धन्यवाद दिएका छन । साथै, उनले काजोल र न्यासा दुबै स्वस्थ रहेको र कोरोनाको संक्रमणमा नपरेको उल्लेख गरेका छन । उनले, चिन्ता व्यक्त गर्ने सबै शुभचिन्तकलाई धन्यवाद पनि दिएका छन ।
अहिले सबैजसो बलिउड कलाकार घरमै समय बिताइरहेका छन । काजोल र न्यासा यो बिचमा अस्पतालमा देखिएपछि उनीहरुलाई कोरोना भएको भन्दै सामाजिक संजालमा चर्चा सुरु भएको थियो ।
र याे पनि : को-को थिए काजोल परिवारका महिला स्टारहरु?
बलिउड अभिनेत्री काजोलले इन्स्टाग्राममा एउटा तस्बिर शेयर गरिन्, यो तस्बिरमा काजोलमात्र थिइनन्, आमा तनुजा, उनकी स्वर्गीय हजूरआमा शोभना समर्थ र सानीमा नूतन थिए।
उनले क्याप्सन लेखेकी छन्, ‘उहाँहरुबाट नै म बनेकी हुँ, सही अर्थमा महिलावादी।’ उनको यो पोष्टमा उनकी बहिनी तनीषाले इमोजी पोस्ट गरेकी छन्। यस्तै तस्बिरमा फ्यानहरुले फोटोको तारिफ पनि गरेका छन्। उनीहरुले यो तस्बिर धेरै मन परेको बताएका छन्।
धेरैले सशक्त महिलाहरु, प्रेरणादायी महिलाहरु र सशक्त महिलाहरु भनेर कमेन्ट गरेका छन्।३०–४० को दशकमा सक्रिय थिइन् शोभना समर्थ। शोभना सन् १९३५ मा ‘निगाहेँ नफरत’ बाट चलचित्र क्षेत्रमा कदम राखेकी थिइन्, उनले १९४३ मा चलचित्र ‘राम राज्य’ मा उनी द्वारा निभाइएको पात्रको लागि सम्झने गरिन्छ। उनी निर्देशक पनि थिइन्, सन् २००० को फ्रेब्रुअरी ९ मा उनको निधन भएको थियो।
तनुजाले खूब नाम कमाएकी थिइन्, ६० र ७० को दशकमा उनी असाध्यै सक्रिय थिइन् । उनले ‘हाथी मेरो साथी, बंदिश, अनोखा रिश्ता, ज्वेल थीफ, जोने की रह सुहागन, स्वर्ग नरक’ जस्ता धेरै चलचित्रमा काम गरिराखेकी छन्। सन् २०१४ मा उनले फिल्मफेयर अवार्डमा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित भएकी थिइन्। अहिले उनी ७६ वर्षकी भइन् र चलचित्र क्षेत्रबाट टाढा छिन्।
शोभनाकी दोस्रो सन्तान नूतन पनि चलचित्र इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थानमा छिन्। ६०–७० को दशकमा उनले ‘सुजाता, छलिया, मिलन तेरे घर के सामने, सरस्वतीचद्र, खानदान’ जस्ता चलचित्रमा गरिन। उनलाई सन् १९७४ मा पद्म श्री पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो। ५४ वर्षको उमेरमा नै उनको निधन भएको थियो।काजोलको कुरा गर्ने हो भने उनले ‘तानाजी– द अनसँग वारियर्स’ मा सावित्रीबाई मालुसरेको भूमिकामा देखिएकी छन्। यो चलचित्रमा अजय देवगनले तानाजी मालुसरेको भूमिकामा छन्। यो चलचित्र बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गरिरहेको छ।